हिमेश - साप्ताहिक
सुक्दै बंगलादेशी फुटबल
हिमेश, आश्विन १५, २०७५
गोलरक्षकको भुलमा बंगलादेशले के पहिलो गोल खायो, दर्शकले त्यसलाई सहन सकेनन् । मैदानतिर बोतल फ्याँक्न थालिहाले । त्यसो त यो राम्रो होइन, तर यसबाट उनीहरूको बंगलादेशी फुटबलप्रतिको प्रेम र लगाव पनि झल्कन्थ्यो । कस्तो छ त आजभोलि बंगलादेशी फुटबल ? यही प्रश्न त्यहाँका पत्रकारहरूसँग सोध्ने हो भने उत्तरमा आक्रोस र विद्रोही भाव बढी पाइन्छ ।
एसियाली खेलकुद : हामी कहाँनिर चुक्यौं ?
हिमेश, भाद्र २४, २०७५
एसियाली खेलकुदमा परम्परागत रूपमा इन्डोनेसिया निकै बलियो देश पनि होइन, तर यसपटककै एसियाली खेलकुदका क्रममा उसले अपेक्षा अनुसार राम्रो प्रदर्शन मात्र गरेन, बरु पदक तालिकामा बलियो उपस्थितिसमेत जनायो । इन्डोनेसियाले ३१ स्वर्ण, २४ रजत तथा ४३ कांस्य पदक जितेको थियो ।
विश्वकप फुटबलपछि अब एसियाड
हिमेश, श्रावण २२, २०७५
पहिले २०१८ को एसियाली खेलकुद भियतनामले गर्ने तय जस्तै थियो, तर उसले समयमै आफ्नो तयारी गर्न त सकेन नै, त्यसमाथि उसले पूरा प्रतियोगिताको खर्च उठाउन पनि असमर्थता देखायो । यस्तोमा एसियाली खेलकुदको एक अगुवा इन्डोनेसियाले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लियो । फिलिपिन्स र भारतले समेत आयोजनामा रूचि देखाएपनि इन्डोनेसियाको दावेदारी बलियो रह्यो ।
डीपीएलमा जो चम्किए
हिमेश, वैशाख २०, २०७४
खराब लयबाट गुज्रिरहेको एउटा टिमलाई सफलतातर्फ कसरी डोर्‍याउनुपर्छ, त्यसको उदाहरण पारस खड्काले प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्य समस्याका कारण पारसले आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिगमा केन्याविरुद्धको खेल खेलेका थिएनन् ।
बढी टिमको विश्वकप प्रभाव
हिमेश, माघ ११, २०७३
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले विश्व फुटबललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने एउटा ठूलो निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णय हो— सन् २०२६ देखि विश्वकपमा सहभागी टिमको संख्या बढाएर ४८ पुर्‍याउने । अब सुरुमा तीन–तीन टिम सम्मिलित १६ समूहमा प्रारम्भिक प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
हिमेश, मंसिर १६, २०७३
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान विराज महर्जनको परिचयका धेरै आयाम छन् । उनी निकै मेहनत गर्न रुचाउने खेलाडी हुन् । विराज सोझा पनि मानिन्छन्, बोल्न लजाउँछन् । सार्वजनिक रुपमा कम बोले पनि नजिकका साथीभाइसँग भने खुलेरै बोल्छन् ।